पत्रिका Archives - panchakoshitimes.com
सेयर खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने रकम तयार पार्नुस्। विभिन्न २४ कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ)को अन्तिम तयारी गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका ती कम्पनीले साढे ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेका हुन्। सेयर निष्कासनको अन्तिम तयारी गर्ने कम्पनीमा १४ जलविद्युत्‌का छन्। त्यस्तै, ६ लघुवित्त, २ बिमा र २ अन्य कम्पनी पनि आइपिओ निष्कासनको त...
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । ९ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसैअनुरूप केही प्याकेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण अघि बढेको छैन । वर्षेनि कम बजेट छुट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको रेल विभागले बताएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्...
साढे ३३ किलो सुन प्रकरण : मुख्य आरोपी तीन लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटे
चार वर्षअघिको चर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य आरोपी ५७ वर्षीय मोहनकुमार अग्रवाल मोरङ जिल्ला अदालतमा सोमबार हाजिर भएर तीन लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटेका छन् । अदालतमा उपस्थित भएसंँगै प्रारम्भ भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले तीन लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतका स्रेस्तेदार टिकेन्द्रवीरजङ्ग राणाले न्याया...
धान बेच्न पनि सिफारिस चाहिने
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिदका लागि किसानसँग कृषि ज्ञान केन्द्र, नेपालगञ्जको सिफारिस माग गरेको छ । सिफारिस लिन केन्द्रमा पुगेका किसानले समयमै सिफारिस पत्र नपाउँदा केन्द्रमा तोडफोडसमेत गरेका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नेपालगञ्जका प्रमुख रामबहादुर विष्टले यस वर्ष किसान पहिचान गराएर मात्रै धान दरिद गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै त्यसका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफ...
बालबालिकालाई ४ पुसदेखि मोडेर्ना खोप
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १२ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई ४ पुसदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार ५७ जिल्लाका बालबालिकालाई मोडेर्ना खोप दिइनेछ । हिमाली जिल्लासहित ५७ जिल्लाका विद्यालयमै खोप केन्द्र तोकेर बालबालिकालाई खोप दिइने विभागले जानकारी दिएको छ । यसअघि फाइजर खोप अभियान सञ्चालन भएका जिल्लाका बालबालिकालाई भने फाइजर खोप दिइनेछ । स्वास्थ्य से...
मदिराजन्य विज्ञापन एक देशले मात्र रोक्न खोज्नु कत्तिको जायज ?
नेपाल विज्ञापन संघ, मिडिया अलाइन्स नेपाल र मिडिया सोसाइटी नेपाललगायत संस्थाले जनस्वास्थ्य ऐनको हवाला दिँदै मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायतका जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण प्रचारप्रसार नपाउने गरी विज्ञापन बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघ र नेपाल फुटबल स...
नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ। यस हिसाबले ओली दोस्रो पटक एमालेको नेतृत्वमा पुग्ने पक्का भएको छ। उनी नवौं महाधिवेशनमा तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई हराउँदै अध्यक्ष बनेका थिए। नवौं महाधिवेशनमा ओलीले नेपालको भन्दा ४४ मत बढी पाएका थिए। अहिले भने ओली भारी मतान्तरले विजयी हुने सम्भावना छ। दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले ...
चौध महिनाअघि जयनगर–कुर्था (३४.९किलोमिटर) खण्डमा रेल चलाउने भन्दै भारतबाट दुई थान रेल तामझामसहित भित्र्याइयो। सरकारले आवश्यक तयारीबिनै ८४ करोड रुपैयाँ खर्चेर दुई थान रेल जनकपुर ल्याएको थियो। रेल ल्याएको १४ महिना बित्यो तर नेपाल रेल्वे कम्पनीले अहिलेसम्म न कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छ न त रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नै तयार भएको छ। रेल चलाउने बजेटसमेत छैन। रेललाई त्रिपालले छोपेर राखिएको छ। त्रि...
निर्धारित समयभन्दा सात घण्टा ढिलो गरी नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय मतदान सुरु भएको छ। सोमबार राति ९ बजेदेखि सुरु हुने भनिए पनि अहिले बिहान ४ बजे सुरु भएको थियो। निवर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरी मतदान गरेका हुन्। ओली सहित शीर्ष नेताहरू सबैले मतदान गरिसकेका छन्। अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार भीम रावलले पनि सँगसँगै मतदान गरेका थिए। कार्यालय सचिव शेर...
सार्वजनिक यातायातलाई जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम)मा भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भीटीएस) प्रणालीमा जोड्ने काम सुरु भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षणस्वरूप १७ वटा बसमा जीपीएस जडान गरिसकेको छ । एक सयवटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान गरिने भएको छ । विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भन्नुभयो, “भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम सुरु भएको छ । अहिले प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गरिरहेका छौँँ । एक सात...